संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छे को हो | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 30/12/2021 22:00 | फिट, तन्दुरुस्ती, जीवन शैली, आराम
संसारको सबैभन्दा बलियो मानिसलाई धेरै वर्गहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर देखाउनका लागि धेरै प्रतिस्पर्धी तरिकाहरू छन् सबैभन्दा बलियो मानिस, जहाँ उनीहरूले सबै वर्षहरूमा आफ्नो शक्ति देखाउनुपर्नेछ।
त्यहाँ पुरुषहरूको लागि मात्र प्रतियोगिताहरू छैनन्, तर त्यहाँका लागि वर्ग पनि छन् संसारको सबैभन्दा बलियो महिला, जहाँ यो पुरुषहरु द्वारा प्रयोग गरिएको वजन को 70% प्रतिद्वंद्वी छ। सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा मा पाइन्छ बल एथलेटिक्सजहाँ उनीहरूले पावरलिफ्टिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
1 पावरलिफ्टिङ भनेको के हो?
2 टम स्टोल्टम्यान
4 इतिहासमा समीक्षा
पावरलिफ्टिङ भनेको के हो?
IFSA उनी स्ट्रेंथ एथलेटिक्स कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मेवारीमा छिन्। उहाँले 2005 मा Met-Rx सँग अलग्गनुभयो र आफ्नो पुरस्कार-विजेता प्रतियोगिताहरू गर्न थाले संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छे। यसको घटनाहरूमा हामी विशाल ट्रंक, ब्यारेल, एटलस ढुङ्गाहरू उठाउने देख्न सक्छौं। वा रेफ्रिजरेटर, ट्रक, हवाइजहाज, कार, टाउकोले उठाउने, ब्यारेलको साथ स्क्वाट्स जस्ता वस्तुहरू ढुवानी र तान्दा ...
सबै प्रतिस्पर्धीहरू बीच बलको परीक्षण गरिन्छ, जहाँ उनीहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ राम्रो सहनशीलता र राम्रो गति। यो पछिल्लो वर्ष, २०२१ मा, टम स्टोल्टम्यान, इन्भरगोर्डनका स्कट्सम्यान देखा पर्‍यो।
मे ३०, १९९४ मा जन्मिएका यी प्रतियोगी स्कटल्याण्डको इन्भरगोर्डनका बासिन्दा हुन् । संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छे जुन २०२१ मा। उनी २०२१ मा युरोपको सबैभन्दा बलियो व्यक्तिको कान्छो भाइ हुन् र पाँचौंको रूपमा च्याम्पियन पनि थिए। 2019 को सबैभन्दा बलियो मानिस।
टम एक मानिस हो जो अटिजम संग जन्मिएको थियो, एक रोग जसले सजिलै संग सामाजिक अन्तरक्रिया र संचार असक्षम गर्दछ। तर यदि उसले के हासिल गरेको छ भने, यो उनको ढाँचा र उनको दोहोरिने को लागी धन्यवाद छ जित्ने आत्मा तिनीहरूको सोच र व्यवहारमा।
को एक दिनचर्या पालना गर्नुहोस् दैनिक र प्रतिस्पर्धा अभ्यास जसले उसलाई आफ्नो 'सुपर पावर' लाई वर्णन गरे जस्तै मूल्य र रेकर्डमा पुग्न मद्दत गरेको छ। यी चरणहरू अनुसरण गरेर तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि चुनौती सामना गर्न सक्छ र त्यो उसको महान अनुशासन बनाउँछ। यदि तपाईंले संकेत गरेको कुरा पालना गर्नुभएन भने, तपाईंले आफूलाई सक्षम देख्नुहुन्न, त्यसैले हामी अझै पनि यसलाई वयस्कहरूको लागि ठूलो प्रयासको रूपमा वर्गीकृत गर्छौं।
तपाईंको व्यक्तिगत रेकर्डहरू मा जस्तै केहि डाटा चिन्ह लगाउनुहोस् पावरलिफ्टि, स्क्वाट्स र 325 kg सम्म होल्डिंग, 360 kg को डेडलिफ्ट र -220 kg को साथ बेन्च प्रेस। को प्रतियोगितामा बलियो मान्छे उनले 7,50 मिटर ब्यारेल थ्रो, 190 केजी शाफ्ट प्रेस र स्ट्र्यापसहितको डेडलिफ्ट र -430 केजीको डेडलिफ्ट सूट पुगेका छन्।
मा जिम मा प्रतिस्पर्धा परीक्षा यसले 215kg लग प्रेस, -286kg एटलस स्टोन लिफ्ट, 345kg स्क्वाट्स, र 420kg डेडलिफ्टको साथ डाटालाई पनि पार गरेको छ।
उनी विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति पनि बनेका छन् धेरै रेकर्ड तोडे। यस श्रेणीको साथ नाम दिइएको छ चार पटक सम्म रूस मा, सधैं यसको प्रत्येक प्रतियोगिता मा आफूलाई पार गर्दै।
3 वर्ष पहिले उनले आफ्नो डेटा क्रेडिट गरेर आफ्नो सुधारलाई हराए गिनिज बुक अफ रेकर्ड्सजहाँ उसले २६ टनको ट्रक तानेको थियो। उनको हालको कीर्तिमान मध्ये, यो ध्यान दिनुपर्छ कि उसले उठाउन सक्षम छ आफ्नै काँधमा हेलिकप्टर 1.476 किलोग्रामको वजन। उनी सर्न पनि सफल भएका छन् बोइङ ७३७ विमान 36 टन को, जहाँ उसले यसलाई 25 मिटर सम्म ठाउँबाट सार्न सक्षम थियो।
यस चुनौतीमा उनले आफूलाई विमान सार्न लगभग असम्भव थियो, यो असम्भव देखिन्थ्यो तर उनले आफ्नो भित्री शक्तिलाई पुन: प्राप्त गर्न र यसलाई सार्न सक्षम भएको बताए। त्यहाँ धेरै चुनौतिहरू छैनन् जसको उहाँ प्रतिरोध गर्नुहुन्छ, उहाँका व्यक्तिगत उपलब्धिहरू मध्ये उहाँ यतिसम्म पुग्नुहुन्छ कि उहाँका लक्ष्यहरू कारण छन्। ठूलो कसरत र लगनशीलता। आफूलाई आविष्कार गर्न झन्झटिलो हुँदै गएको पनि उनी बताउँछन् यस सुधारको लागि नयाँ अभ्यास, किनकि ट्रक तान्न सक्षम हुनु धेरै सरल जस्तो देखिन्छ।
टम स्टोल्टम्यानले प्रतिस्पर्धाको रूपमा इतिहास बनाएको छ जुन पहिले नै जन्मिएको थियो बल एथलेटिक्स। प्रतियोगिताहरूको लामो इतिहास भित्र, वाइकिंगहरू पहिले नै ढुङ्गाहरू उठाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा थिए। शताब्दीयौं पछि स्कटल्याण्डमा माउन्टेन खेलहरू आयोजना गरियो जहाँ तिनीहरू ट्रंक उठाएर परीक्षण गरियो। यो जहाँ पहिलो घटनाहरू जन्मेका थिए र जहाँ तिनीहरू पछि बास्क देशमा सारियो।
सर्कसका बलवानहरू तिनीहरूले XNUMX औं र XNUMX औं शताब्दीको प्रारम्भमा सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमा पनि आफ्नो शक्ति र सहनशीलता प्रदर्शन गरे। आफ्नो कर्मका साथ उनको जन्म भएको हो आधुनिक भारोत्तोलन र यसले आज हामीलाई लुइस साइर र एङ्गस म्याकआस्किल जस्ता महान खेलाडीहरूको नाम छोडेको छ।
पहिलो प्रतियोगिता को विचार बाट जन्म भएको थियो 1977 मा क्यालिफोर्नियामा आईएमजी। शारीरिक सुगठन, भारोत्तोलक र फुटबल खेलाडीहरू सहित विभिन्न प्रकारका खेलाडीहरूलाई आमन्त्रित गरियो र त्यहाँबाट धेरै उपाधि र पुरस्कारहरू सङ्कलन गरियो। आजसम्म, अन्य विभिन्न प्रतियोगिताहरू जस्तै Elbrús Nigmatullin का आयोजनहरू जारी छन्, आधिकारिक प्रतियोगिता बाहिर प्रयास गर्दै र गिनिज बुक अफ रेकर्ड दर्ता।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » संसारको सबैभन्दा बलियो मान्छे को हो